Libanona: Tsy niresaka momba ny famoriam-bahoakan-dry Hariri ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Libanona: Tsy niresaka momba ny famoriam-bahoakan-dry Hariri ny Bilaogera
Voadika ny 18 Marsa 2011 3:41 GMT
Rehefa nahazo aingam-panahy avy tamin'ny fihetsiketsehana manerana n tontolo Arabo dia nanao famoriam-bahoaka tao Beirota ny praiminisitra teo aloha Saad al-Hariri tamin'ny Alahady teo mba hiantso amin'ny fanesorana fitaovam-piadina ny Hetsika tsitohaina Shi'ita Hezbollah.
Ny Hezbollah no antoko politika lehibe indrindra sady vondrona tokana mbola mitazona ny fitaovam-piadiany – no nanala an'i Hariri sy ny ankolafiny 14 Marsa avy amin'ny governemanta, tamin'ny Janoary, sady mirona amin'ny tandrefana taorian'ny fisintahan'ny mpitarika Druze (Atoa) Walid Jumblatt ho ao amin'ny tobin'ny Hezbollah.
Na dia teo aza ny fahazoana mpanohana aman'arivony hamonjy ny famoriam-bahoaka dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny tontolom-bolongana Libaney, izay tsy niteny na inona na inona momba ity fihetsiketsehana ity amin'ny ankapobeny izay nataon-dry Hariri.
Azo jerena any amin'ny bolongana Libaney vitsivitsy ny tatitra madinidinika momba ny famoriam-bahoakan-dry Hariri, izay mifanipaka tanteraka amin'ny anjara toeran'ny valan-tserasera (media sosialy) tany amin'ny tany Arabo nisiana fihetseham-bahoaka tany Ejipta, Tonizia, Libya ary Bahrain.
Ao anatin'ny firoboroboan'ny adihevitra momba ny andraikitry ny valan-tserasera amin'ny fitroaram-bahoaka, misy ny manontany raha mety tontosa ny revolisiona tsy misy ny fanampian'ny valan-tserasera. Mendrika ny horesahina indrindra ny fandresen-dahatra avy amin'izany ho an'i Libanona farafaharatsiny.
Eny tokoa, miavaka ny toe-javatra mitranga ao Libanona ao amin'ny tontolo Arabo, izay miaina ao ambanin'ny fitondran'olo-tokana tsy refesi-mandidy ny ankamaroan'ny faritra. Ao Libanona kosa mifanohitra an'izany, fa efa saika manjaka ny demokrasia voafetran'ny endrika ara-pivavahana ny rafitra ara-politikany izay mahatonga ny antokom-pivavahana ho mifandrafy mba hahazoana ny fahefana.
Efa tafahoatra lavitra izany fifandrafiana rafetin'ny rafitra politika izany kosa ny tontolom-bolongana Libaney, ka mametraka azy ho mahasolo feo ny raharaha Libaney tsy hiankina amina fironana iray. Toromarika manandanja ho an-dry Hariri hisintona ny Libaney tsy naka fironana hiara-dia aminy noho izany ny tsy nilazan'ny tontolom-bolongana ny fihetsiketsehana nataony.
Na dia izany aza, nilaza ny heviny momba ity fihetsiketseham-panoherana ity ny mpamaham-bolongana Libaney malaza iray – Beirut Spring – :
Nialoha indrindra ny hikabarian'Atoa Hariri dia nisy sary vaventin'ny Mpanjaka Abdallah avy any Arabia Saodita napetaka tamin'ny rindrin'ny Virijiny ary lasa haingo an-damosin'ny kabarin'Atoa Hariri.
Nitolagaga tanteraka aho raha nahita izany satria mifanohitra amin'izay ijoroan'ny 14 Marsa izany. Zavatra roa monja no homarihako: Ny fandavana ny fitsofohan'ny vahiny ao Libanona sy ny fiakanjoana ny sanda liberaly tahaka ny fahafahana, demokrasia ary ny fahamaroan'ny antoko (ary tsy misy any Arabia Saodita avokoa ireo rehetra ireo).
Lazaina fa novelarina ny sary vaventin'ny mpanjaka mialoha ny kabarin'Atoa Hariri. Izany dia midika fa mahalala ny misahana ny fitantanana ny fitaovana fa famonoantena politika ho an'ny mpikabary kristiana tahaka an'Atoa Samir Geagea sy Amin el Gemayel ny fisiana haingo an-damosina sahala amin'itony.
Fa nahoana no itony sary vaventy itony no novelarina voalohany? Ny valinteny tsara indrindra dia izao: Hafatra mivandravandra ho an'Atoa Najib Mikati sy ny hafa rehetra io fa izay rehetra lazain'Atoa Hariri eo dia ankatoavin'ny Mpanjaka Saodiana. Amin'ny teny hafa, nahazo amin'ny fomba “ofisialy” fanilihana (fanaon'ny) sonita Atoa Mikati.
Mandeha any amin'ny YouTube moa ny lahatsary fanesoana an'i Hariri manala ny palitaony:
Mpanohana iray, Elie Fares, no nanome ny antony nanatrehany ity famoriam-bahoaka ity ao amin'ny bolongany A Separate State of Mind:
1. Mandray anjara aho hamela ilay olona (antitra) teo aloha, manameloka ahy ho tsy misy intsony, fantaro fa eto aho hijoro.
2. Mandray anjara aho ho fantatr'izao tontolo izao fa tsy ahofa aho akory.
3. Mandray anjara aho satria tiako hiverina any amin'ny lalana nofidiako aloha tamin'ny 2009 ny fireneko.
4. Mandray anjara aho satria toa manadino ny fomba fitondrana maharikoriko nitondran'ny Siriana fony ry zareo nifehy ny firenena ny olona.
5. Mandray anjara aho fa ny fomba fijeriko an'i Libanona ho tsara indrindra dia tsy mampiditra ny vondrona mitam-piadiana manao izay tiany atao, izay rehetra tadiaviny sy antenainy dia tsy misy idiranao izany.
6. Mandray anjara aho satria tsy manaiky ny fihatsarambelatsihy politika – izay efa tena malaza tokoa amin'izao fotoana.
7. Mandray anjara aho satria laviko ny filazana ahy ho “andrian'ondry” raha mba manana ny hevitro aho eto Libanona.
8. Mandray anjara aho satria tsy tiako hikatso eo ambaravaran'ny masoivoho vahiny ny ho aviko ary mahazo matoandahatsoratra aho rehefa eny an-tseranana fa anaty lisitra mainty ny fireneko.
9. Mandray anjara aho satria izahay [fahiny] no “anjely”n'ity firenena ity, izao no fotoana izahay indray no ho devoliny (in a peaceful and organized way, of course)
10. Mandray anjara aho noho ireo martiora anay, izay namoy ny ainy mba hanavotra ity fireneana ity ho afaka sy hanana fiandrianam-pireneny, dia tokony tsy ho adinoina.
11.Mandray anjara aho satria ao anatin'ny tontolo matroka, ny foto-kevitra momba ny rariny no iray manome fahazavana.
12.Mandray anjara aho satria mino aho fa fotoana lehibe izao hijoroantsika amin'izay inoantsika.
13. Mandray anjara aho satria izay no tiako.
Na dia mety ho nahazo ny maro anisan'ny gazety Libanezy aza i Hariri, dia kely ihany ny heriny amin'ny ankamaroan'ny feo tsy miankina eto amin'ny firenena: valan-tserasera.